Fampirantiana an-tserasera an-tserasera faha-128
Ny 128th Canton Fair an-tserasera tongava amin'ny efitrano fandraisam-bolanay Ny vokatray lehibe: GI Coil / Gl Coil / PPGI Coil / Roofing Sheet sns Adiresy mivantana: https://ex.cantonfair.org.cn/pc/zh/exhibitor/4ab00000-005f -5254-e31d-08d7ed7aefee Fotoana mivantana: 15 Oktobra -24th 2020. Samy isa: 11.2L45 Hamaky bebe kokoa »
Tsena Galvanized Coil Coil an'ny mpilalao fototra ambony, habe, fizarana, vinavina, famakafakana ary faminavina hatramin'ny taona 2031
Ny Global Galvanized Steel Coil Marketplace dia manome tombana amin'ny antsipiriany momba ireo lafiny manan-danja rehetra momba ny tsena. Ny fanadihadiana momba ny toekarena Steel Galvanized Steel Coil dia manolotra hevi-dalina lalina momba ny tsenan'ny Galvanized Steel Coil mandrakotra ny char ...Hamaky bebe kokoa »
Ny tatitra momba ny asa aman-draharaha momba ny fandraharahana Coil Coating Market dia ampahany manandanja amin'ny famolavolana orinasa sy fomba voarindra hitambarana sy handraketana vaovao momba ny indostria Chemical and Materials, tsena, na mety ho mpanjifa. Ity tatitra ity dia namboarina tamin'ny fandinihana dingana maro izay mety hiditra ...Hamaky bebe kokoa »
Hetsika lehibe an'ny orinasa
1. 800 taonina ny ravina mitafo fanitso Galvanized aondrana any Etiopia vita ny famokarana, ny fanaraha-maso ary ny fonosana vita amin'ny kalitao. Tao anatin'izay taona vitsivitsy izay. Niara-niasa tamina firenena afrikana atsinanana izahay. Ho an'ny exmaple.Ethiopia, Djibouti Somalia ary Kenya. 2. Nanatrika ny foara faha-127 tany Canton izahay tamin'ny ...Hamaky bebe kokoa »